Heshiis Indonisia la gaartey burcad badeeda si ay u siidaayaan markab ay…(SAWIRO) – SBC
Heshiis Indonisia la gaartey burcad badeeda si ay u siidaayaan markab ay…(SAWIRO)
Shirkad laga leeyahay wadanka Indonesia ayaa heshiis la gaartey kooxaha burcad badeeda Soomaaliya si ay u siidaayaan markab ay afduub u qabsadeen laba bilood ka hor. Shirkadan oo lagu magacaabo PT Samudera Indonesia oo qaabilsan hawlaha maraakiibta ayaa shaaca ka qaaday in kooxaha burcad badeeda u ogolaatey bixinta lacag gaaraysa 4.5 milyan oo doolar taasi oo ah madaxfurasho ay ka bixinayso siideynta markabka Sinar Kudus & 20 shaqaale ah oo dul saran.
David Batubara oo ah madaxweyne kuxigeenka shirkada PT Samudera Indonesia oo la hadlayey wakaalada wararka ee AFP ayaa xaqiijiyey in lacagta madaxfurashada ee gaaraya 4.5 milyan oo doolar hawada looga daadiyey kooxaha burcad badeeda si ay u siidaayaan markabka. “Waxaan soo gabagabeynay qorshihii wadaxaajoodka, isla markaana waxaan la gaarnay kooxaha burcad badeeda heshiis uu ka mid yahay qaabka lacag bixinta, laakiin qorshihii siideynta waa mid soo socda waa aynu sugaynaa horumarka arinkaasi laga gaaro” ayuu yiri David Batubara. Siideynta markabka ayaa waxaa dib u dhac ku yimid ka dib markii la sheegay in qalad ay noqotey lacagtii burcad badeeda hawada looga daadiyey taasi oo tirinteeda la sheegay in ay is dhintey taasi oo keentey in kooxaha shufto badeedu ay diidaan in ay ka degaan markabka oo ay siidaayaan ilaa lacagta laga soo dhameystirayo.
Bishii March sanadkan 30 ilaa 50 ka mid ah kooxaha shufto badeeda Soomaalida ayaa markabkan gacanta ku dhigey iyagoo ka qabsadey 320 mile meel uga began waqooyiga beri jasiirada Socotra ee Yemen ay maamusho Markabkan ayaa ku sii jiiday wadanka Holland waxaana uu ka soo ambabaxay jasiirada Sulawesi ee dalk Indonesia xiligii la afduubayey.
Bishii aynu ka soo gudubnay xukuumada Indonesia ayaa shaaca ka qaaday inay ciidamo military si ay isugu dayaan siideynta badmaaxiinta markabkaasi lagu dul qabsadey.